Madaxii hore ee booliska Uppsala oo la xirey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Göran Lindberg, häktades
Madaxii hore ee booliska Uppsala oo la xirey
Publicerat fredag 29 januari 2010 kl 14.29
Madaxii hore ee booliska Uppsala Göran Lindberg, waxaa lagu edeeya in uu kufsaday gabar aad u dayar sannadkii hore ee la soo dhaafay. Dhinaca kalan uu isku diyarina hayey falal dhigoodaa, oo uu ku baadi gooba hayey faro xumeenta caruurta.
Göran ayaa la dhigay xabiska shalayto oo khamiis aheed. Dhacdadan ayeey dad badani ka gilgilasheen una arkan mid lama fishaan, waayo Göran Lindberg waxuu ahaa nin ku dhex la haa bulshada xurmo iyo sumacad weyn oo wanaagsan, taas oo hada meesha ka baxday ayna kuwa dhigiisaahi u arkaan in falkaani u soo jiidi karo sherafdaro booliska oo dhan, taas waxaa yiri Madaxa guud ee booliska qaranka Bengt Svensson.
Ninkaan ayaa sanadyadii ugu danbeeyay maxaadirooyin ka jeedin jirey sinaanta raga iyo dumarka iyo isku galmoodka silcinta. Dhamaan dacwooyinkaa ka dhanka ah ee lagu xirey ayuu Göran inkirey, sheegayna inuusan wax danbiya galin